Yurop na-achọ imepe ụlọ erimeri okpuru mmiri nke mbụ
N’oge na-adịghị anya, Yurop ga enwe ụlọ erimeri (restaurant) okpuru mmiri nke mbụ ya na mba Nọọwee akpọrọ “Under” nke pụtara okpuru, nke e jiri kọnkịrị were wuo n’ikpere mmiri Nọọwee nke ndi sere ya bụ ụlọ-ọrụ na-ese ụlọ (architecture) a kpọrọ Snohetta. E sere ya bụ ụlọ erimeri kaRead More →
AKPỌGIDELE MMADỤ ASAA N’OBE NA MBA FILIPIN
Akụkọ anyị si na Mba Filipin nweta na-ekwu na mmadụ asaa nke otu onye n’ime ha bụ onye inyom ewerela onwe ha nye ka-akpọgide ha n’obe ka esiri kpọgide Jizọs. N’echiche ha, nkea bụ iji kwanyere Jizọs ugwu ma sorokwa ya taa ahụhụ dika ndi na-eso ụzọ ya. Mmadụ asaaRead More →
MMEMME ỌNWỤ NA MBILITE N’ỌNWỤ JIZỌS 2
Taa bụ Satọde di nsọ (Holy Saturday). Taa bụ ụbọchị ndi kwere na Jizọs nọ na nche ịhụ mbilite n’ọnwụ ya. Anyị bụ ndi Igbo na-ekwu okwu sị na nwa ikorọbịa na-eche enyi ya nwanyị n’abalị na-anụ nzọm ụkwụ ndi mụọ. N’otu aka ahụ, anyị bụ ndi otu Kraist n’ụwaRead More →
Otu n’ime nnukwu mmemme ndi otu Kraist na-eme n’ụwa nile gbaa gburu gburu bu mmemme ncheta afụfụ na ọnwụ tinyekwara mbilite n’ọnwụ Jizọs Kraist. N’eziokwu, enwekwara ọtụtụ mmemme ọzọ ndi otu Kraist na-emegasi dịka Ekeresimesi, mmiri- chukwu Jizọs, nrọgoro Jizọs n’enigwe nakwa ọtụtụ ndi ọzọ. Mana mmemme nke Isita bụRead More →
OGBENYE/ỤBỊAM/AHỤHỤRead More →
NDI ỌRỤ NDLEA ANWỤCHIELA OTU NWA AGBỌGỌBỊA ZORO ỌGWỤ IKE N’UWE ARA YA
NDI ỌRỤ NDLEA ANWỤCHIELA OTU NWA AGBỌGỌBỊA ZORO ỌGWỤ IKE N’UWE ARA Y Na steeti Katsina, ndi ọrụ ala anyị na-alụ ọgụ megide ọgwụ ike bụ National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA n’aha ichafụ anwụchiela otu nwa agbọgọbịa di afọ iri na itolu ebe o bu ogwụ megidere iwu. NwaRead More →
Ndi ụlọ Kọmishọnụ na-ahụ maka Mkpata nakwa ikesa ego n’ala anyị bụ Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission RMAFC, n’aha nkenke ekwola na ọbụ nanị ndi na-ahụ maka ọdị mma ndi omebe iwu ala anyị, bụ National Assembly Service Commsdion, NASC, nwere ike ịkọwa ka ụgwọ ọnwa nakwa ego mmachiRead More →
GỌỌMENTI ETITI EWEGHACHILA ỌMỤMỤ AKỤKỌ MGBE OCHIE N’ỤLỌ AKWỤKWỌ
Minista ukwu ala anyị agụmakwụkwọ dị n’aka, bụ Mallam Adamu Adamu, ekwuola na Gpọmentị Ala anyị eweghachila ọmụmụ ihe gbasara Akụkọ Mgbe Ochie bekee kpọrọ History n’ụlọ akwụkwọ Sekọndịrị ala anyị. Ọ sịrị na nkea ga-eme ka ụmụ akwụkwọ anyị mata ihe megasịrị n’ala anyị n’oge gboo. Anyị ga-aghọta naRead More →
NDI NCHE EHI AMALITEKWALA IBU AGHA NA STEETI BENUE
Ndi ana-ahụta dịka ndi nche ehi kpọchirikwara ụzọ si Daudu gawa Gbajimba na obodo Tse Torkpande wee gbuo ọtụtụ ndi mmadụ n’ abalị ụbọchị ụka gara aga. Ndi so na ndi egburu dịka onye nta akụkọ anyị siri nụ gụnyere mmadụ abụa ndi obodo ahụ bụ ndi a chọpụtaraRead More →
ỌKỤ AGBAPỊALA ỤMỤAKA ABỤO
Na ngwụchaa izu ụka gara aga ka anyị na-anụ na ọkụ gbagburu ụmụaka abụọ ma merụkwa ọtụtụ ndi ọzọ ahụ na obodo ana-akpọ Mkpong Udong dị na okpuru ọchịchị ime obodo Mbo dị na steti Akwa Ibom. Mkpong Udong bụ ndi eji ịkụ ọkụ azụ nakwa ọrụ ugbo were mara.Read More →
TIGBUO ZỌGBUO DỊ N’ETITI NDI NA-ACHỊ EHI NA NDI ỌRỤ UGBO
– NDI GỌVANỌ MGBAGO UGWU ALA ANYỊ NA OTU NDI NCHE EHI MIYETTI ALLAH ENWEELA ỌGBAKỌ. Otu ndi gọvanọ Mgbago ugwu ala anyị akpọrọ Northern States Governors’ Forum mọbụ NSGF n’aha ichafụ nakwa ndi isi ọrụ nche ehi, nke ala anyị tinyere ngalaba ha na steti di iche iche, kpọrọRead More →
ONWURead More →
EGO/AKỤ/ỌGARANYARead More →
Legọsị: Akpata oyi juru ndi mmadụ ahụ ụnyahụ n’isi ụlọ ọrụ Ndi Uwe Ojii na Legọsị Steeti mgbe e gosipụtara obere ụmụ agbọghọ ndi mgbere mmadụ ghọgburu, ha bịa Legọsị ịgba akwụla n’ụlọ nkwarị akụ (hotel) dị na Iyana Ipaja. Ụfọdụ obere ụmụ agbọghọ ndia ndi nọ n’agbata afọ iriRead More →
Enugwu: Ụmụ nwanyị yi uwe ojii ruru otu narị n’ọnụ ọgụgụ nọrọ ụnyahụ mee ngagharị iwe n’Enugwu maka achụmnọrụ ụlọ ọrụ nzikọrịta ozi, Globacom chụrụ ụmụ nwanyị ndi luru di nakwa ndi muworo nwa site n’abalị itoolu nke Ọnwa Maachị afọ a. Otu chịkọbara ya bụ ngagharị iwe bụ otuRead More →
Enugwu: Otu Igbo Civil Society Coalition bụ otu jikọtara ndị gbanụ gbanụ n’ala Igbo ekwuola na ha enweghị ntụkwasị obi na kọmiti nnyocha nke Ụlọ ọrụ Ime Nhọpụta bụ INEC guzobere maka inyocha ebubo idebanye aha ndi etorughi etoru. N’ozi nke ha weputara mgbe ha mechara ọgbakọ izugbe kwa ọnwaRead More →
Legọsị: Otu Amnesty International eboola Ndi Agha Naịjiriya ebubo emeghi ngwa ngwa mgbe ha nwetara “ọgbụgba ama” elekere ole m’ole tupu Boko Haram atọro ụmụ agbọghọ otu Narị n’iri n’ụlọ akwụkwọ dị na Dapchi, Yobe Steeti. Na ozi nchọpụta ha weputara ọhụrụ, otu a na-ebo ebubo na Ndi Agha nakwa Ndi UweRead More →
Okorọcha apụghị ịkwụsịnwu m- Madụmere
Owere: Osote Gọvanọ Imo Steeti, Ichie Eze Madụmere ekwuola na Gọvanọ Imo Steeti, Owele Anayọ Rochas Okorọcha apụghị ịkwụsị ya ịzọrụ ọkwa ọchịchị ịbụ Gọvanọ steeti ahụ n’isi. O kwuru nkea mgbe ndi ọnụ na-eru n’okwu n’Okpuru Ọchịchị ya bụ Mbaitoli nyere ya nkwado ha. N’ozi si n’aka onye inyeakaRead More →
ILU TAA BỤ MAKA OSISIRead More →